Archive du 20190111
Marc Ravalomanana Ho eo anilan’ny Malagasy hatrany
Raha misy olona mendri-piderana amin’ny fahendrena nasehony angamba eto dia tsy misy tahaka an’i Marc Ravalomanana.
Afaka ireo 7 nosamborina Miandry fitsarana ry Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle,…
Afaka noho ny fisalasalana ireo olona 6 tamin’ireo 7 nosamborina ny 5 janoary lasa teo noho ny tolona ho an’ny fahamarinana teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey.
Hisisika ny 4x4 Hohadinoina ny T shirt nylon ?
Efa ireny hita ora vitsivitsy taorian’ny fanambaran’ny HCC ny 8 janoary ireny ny santatr’ireo tohivakam-panambaram-piarahabana ny filoham-pirenena Malagasy vaovao nataona antoko politika sy olom-panjakana ary fikambanana maro samihafa.
Fanatanterahana ny Vina IEM Sarotra raha tsy hihaino ny mpandraharaha
Nanambara ny filoha mpitantana ny Madaomby, Tahiry Sambehafa fa tokony hisy fiantraikany mivantana amin’ny mpandraharaha sy ny mpiompy ny tetikasa ao anatin’ilay vina IEM napetraky ny filoham-pirenena vaovao.
Baolina kitra Analamanga Voatanan’ny Five Fc ady sahala ny Elgeco Plus
Tsy nikely soroka tokoa, araka ny nambaran’ny mpanazatrany, Navalona, ny ekipan’ny Five Fc nanohitra ny andrarezina Elgeco Plus omaly teny amin’ny kianja sentetikan’i Carion.
Tsipy kanetibe an’olon-droa miaraka Hisy fifaninanana anio ho fananomanana ny « Championnat 2019 »
Ho fanomanana ny fiatrehana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 eo amin’ny taranja Tsipy kanetibe sokajy “Double Mixte”
Filoha nasionalin’ny HAFARI Malagasy Nankasitraka ny fihetsik’i Marc Ravalomanana
Naneho ny heviny mikasika ny zava-nisy teto amin’ny firenena ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy omaly.